အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “2015 ဝတ်ဆင်နည်းပညာ၏တစ်နှစ်ဖြစ်တက် gears” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, The Guardian ကကြာသပတေးနေ့က 25 ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလများအတွက် 2014 12.45 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
"အဲဒီတစ်ဦးက Apple စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Is?"၏နွေဦးရာသီ၌ထွက်မြည်ဖွယ်ရှိတဲ့ထားသောစာပိုဒ်တိုများဖြစ်ပါတယ် 2015 ဝတ်ဆင်ကနည်းပညာထဲသို့ကုမ္ပဏီရဲ့မြင့်မားတဲ့မျှော်လင့် foray ၏ရလဒ်နောက်ဆုံးတွင်စင်ပေါ်တာမျိုးအခါ,.
Apple အတွက်, ထိုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အတွက် iPad နဲ့စတိဗ်ဂျော့ဘ်ကွယ်လွန်ချိန် မှစ. ပထမဦးဆုံးလုံးဝထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ်ပါတယ် 2011. ၎င်း၏ကနဦးအောင်မြင်မှုကိုအာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ်.
"ကသာအချိန်ကိုကြားပြောရင်တောင်, Apple ကပထမဦးဆုံးပစ်လွှတ်သူတို့နှင့်အတူသန်းပေါင်းများစွာရောင်းချဖွယ်ရှိသည်,"ဘင် Wood ကပြောကြားခဲ့သည်, သုံးသပ်သူများ CCS Insight မှသုတေသနအကြီးအကဲ. "Apple ကလှပသောအမှုအရာကိုနှင့်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့လှပအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါတယ်. ၎င်း၏အမှတ်တံဆိပ်အထောက်အထားများနှင့်အတူပေါင်းလိုက်သောကြောင့်လက်ရှိစမတ်နာရီထက်အများကြီးကျယ်ပြန့်အယူခံနှင့်အတူတစ်ဖက်ရှင်ကြေညာချက်နှင့်အဆင့်အတန်းသင်္ကေတဖြစ်သွားရပါတယ်။ "
ဈေးကွက်စောင့်ကြည့်ဘို့ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က Apple အဘို့အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ဒါပေမဲ့ Apple ကအခြားသူလူတိုငျးအတှကျလုပျနိုငျရမယျမဖွင့်.
wearable နည်းပညာအားလုံး Cupertino အတွက် Apple ရဲ့ဌာနချုပ်ကနေပေါက်အဘယ်သို့သောအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး, ကယ်လီဖိုးနီးယား. ဒီနှစ်, Google က Pebble ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး, ခေတ်သစ်စမတ်နာရီ၏ရှေ့ဆောင်, အန်းဒရွိုက် wear တစ်ကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်နှင့်အတူ. Google က LG ကမှချောင်းမြောင်း, Sony နဲ့ Motorola ကိုဇွန်လမှအသုံးပြုသူများက '' လက်ကောက်အပေါ်ဆင်းသက် - အချို့ဆွဲဆောင်မှု, လျော့နည်းဒါကြောင့်တခြားသူတွေကို - က Samsung ၌မတဦးတည်းငါးဒါပေမယ့်စမတ်နာရီထုတ်လွှတ်နေစဉ် 2014.
ကြံ့ခိုင်ရေးကိုခြေရာခံနှင့် smartclothing ၏ထုတ်လုပ်သူစမတ်နာရီထက်ကျော်လွန်ဘဝရှိပါတယ်သက်သေပြဖို့ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်: ယခုနှစ်တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုရောင်းထက်ပို 70m ကြံ့ခိုင်ရေးဝတ်စရာ, စမတ်နာရီ၏ခုနစ်ကြိမ်အရေအတွက်, Gartner မှသုတေသနများအရသိရသည်.
"ငါသည် Jawbone Up ကိုတူစမတ်လက်ပတ်ကောင်းစွာဒီခရစ်စမတ်လုပ်ဖို့မျှော်လင့်တယ်, ထိုစွမ်းရည်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သူတို့သည်ကောင်းသောလက်ဆောင်များကိုလုပ်တဲ့အဆင့်အထိကိုဆင်းလာကြပြီအဖြစ်,"Angela McIntyre ကပြောပါတယ်, Gartner မှမှာသုတေသနညွှန်ကြားရေးမှူး.
ဇန္နဝါရီလလာကြ, အားလုံးမျက်စိကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနည်းပညာကိုကုန်သွယ်မှုပြပွဲများအတွက် Las Vegas တွင်ပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည် - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှထုတ်လုပ်သူများအရာတစ်ခုခုကို punters '' မျက်စိကိုဖမ်းလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးဝတ်ဆင်ပစ္စည်းတွေတွန်းအားပေးပါလိမ့်မည်ဘယ်မှာ - နိုင်ငံတကာကို CES.
ပေမယ့ပလက်ဖောင်းလည်းလာမည့်နှစ်တွင်အချို့စိတ်ဝင်စားစရာဝတ်စရာမကယ်မလွှတ်စေခြင်းငှါ. ဂျော့ခ်ျ Jijiashvili အဆိုအရ, CCS Insight မှအဘို့အဝတ်စရာလေ့လာဆန်းစစ်, နှလုံးခုန်နှုန်းကိုခြေရာခံကြောင်းကြိုးမဲ့ earbuds ရန် "စမတ်" သာမန်လက်ပတ်နာရီစေတဲ့ device ကိုမှတစုံတခုကို, ဂီတလှုပ်ရှားမှုနဲ့ကစား, အားလုံးတစ်ဦးစမတ်ဖုန်းမပါဘဲ, ရန်ပုံငွေများအတွက် pitching နေကြတယ်.
မေးရိုး UP3, သင့်ကျန်းမာရေးနှင့်ကြံ့ခိုင်မှုအကြောင်းကို In-depth ကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့် Multi-sensor ကိုလှုပ်ရှားမှု tracker. ဓါတ်ပုံ: PR စနစ်
နည်းပညာသုတေသီ Gartner မှအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကိုရောင်းချခံရဖို့အခြား 68m ဝတ်ဆင်ကြံ့ခိုင်ရေးထုတ်ကုန်မျှော်လင့် 2015 အနိမ့်သောစျေးနှုန်းပစ္စည်းတွေကသူတို့ကိုပိုပြီးလွယ်ကူပါစေအဖြစ်. အဆိုပါ Misfit Flash နှင့် Jawbone Up ကိုရွှေ့, ဥပမာအားဖြင့်, ထက်လျော့နည်း£ 50 ကကုန်ကျ.
သို့သော်ထိုသို့သော Intel ရဲ့အခြေခံ Peak နှင့် Jawbone Up3 အဖြစ်နှလုံးခုန်နှုန်းစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးကိရိယာများကိုချီတက်သည်, အောင်မြင်စွာ Up ကိုလက်ပတ်မှနောက်ဆက်တွဲ, ကလူမြားကိုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်အိပ်စက်ခြင်းသို့ သာ. ကြီးထိုးထွင်းသိမြင်ပါဝါလိမ့်မည်.
"စိတျနှလုံးနှုန်းကစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုအတွက်ကြီးမားတဲ့အရာဖြစ်ဖွယ်ရှိသည် 2015 ဝတ်ဆင်နည်းပညာကိုကြည့်အများဆုံးလူများအတွက်,"McIntyre ကပြောပါတယ်. "ဒါဟာနှစ်ပေါင်းအတိတ်စုံတွဲသည်အခန့်မယ့်, ဒါပေမယ့်ပိုကောင်းလာပြီရဲ့, ပိုပြီးတတ်နိုင်နှင့်အေးမြအချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်, အထူးသဖြင့်လက်ပတ်နဲ့နာရီပတ်ပတ်လည်။ "
အဆိုပါ Up3 နှလုံးခုန်နှုန်းအားဖြင့်ကျန်းမာရေးကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ကတိကလျှပ်စစ်အသားအရေအာရုံခံကိရိယာရှိပါတယ်, မအသုံးပြုသူလေ့ကျင့်ခန်းအနေဖြင့်ပေမယ့်အချိန်လေးအတွက်မီနှင့်အိပ်ပျော်ကျသွားသို့မဟုတ်နှိုးထပြီးနောက်.
"ဒါဟာတစ်ခုတည်းသောအချိန်ရသောအခါစိတ်ဖိစီးမှုင်, ကဖိန်းဓာတ်နှင့်အခြားအရာအားလုံးသင်ဘယ်လောက်ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့စစ်မှန်တဲ့ရုပ်ပုံအဘို့သင့်စည်းချက်မထိခိုက်နိုင်,"ဂျေဆန် Donahue ကပြောပါတယ်, Jawbone ၏.
chip ထုတ်လုပ်သူ Intel ကလည်းဝတ်ဆင်နည်းပညာရွေ့လျားအောင်သည်. အဆိုပါအခြေခံ Peak ကြံ့ခိုင်ရေးလက်ပတ်နာရီကိုအရေပြားသို့အလင်းထွန်းလင်းထားတဲ့ optical sensor ကိုသုံးပြီး 24 နာရီနှလုံး-rate ကိုခြေရာခံကတိပေးထား. အဆိုပါ Peak နှလုံးခုန်နှုန်းကို အသုံးပြု. အိပ်ပြီးညဥ့်ရဲ့ Kip ၏အရည်အသွေး၏အရေးကြီးအဆင့်ဆင့်ကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်, အစားမယ့်အရေအတွက်ထက်, အများဆုံးအခြားသူများကိုပြုပါအဖြစ်.
Samsung ကငါးစမတ်နာရီစတင် 2014 တယောက်တည်း. ဓါတ်ပုံ: Sean ဒီကိစ္စစစ်တမ်းကောက် / Getty Images
စမတ်နာရီအတွက်ကျန်းမာရေးနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးခြေရာခံခြင်းဂိမ်းအပေါ်၌ဖြစ်လိမ့်မည် 2015 လွန်း. အများစုမှာ Google ကစမတ်နာရီနှလုံးခုန်နှုန်းမော်နီတာရှိသည်နှင့်အ Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့လည်းတဦးတည်းရှိသည်လိမ့်မယ်.
အသုံးပြုသူများအကနှင့်အတူဘာမှမလုပျနိုငျလြှငျသမျှသောဒေတာစုဆောင်းအသုံးဖြစ်ပါသည်, သော်လည်း. Google က, Microsoft နှင့် Apple တို့ယခုနှစ်အတွင်းအခမဲ့ကျန်းမာရေးခြေရာခံန်ဆောင်မှုကြေငြာခဲ့သည်, အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ကျန်းမာရေးကိုဒေတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ကိုကူညီရည်ရွယ်တစ်ခုချင်းစီ.
ဒါဟာသင်ရသင်ယူခြေလှမ်းများ၏နံပါတ်နှင့်အိပ်စက်ခြင်း၏နာရီအဓိပ္ပါယ်ရှိသောအကြံပြုချက်များ generate လိမ့်မည်သည့်နေရာတွင်ယခုနှစ်ဖြစ်ကတိပြု, တစ်ခုခုကိုအသုံးပြုသူသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ဆရာဝန်များအတွက်.
မားကို့စ Giron မှာတစ်ဦးတံခါးပိတ်အစည်းအဝေးအတွင်း Raph Lauren smartshirt ပြ 2014 New York မှာအမေရိကန်ကိုဖွင့်. ဓါတ်ပုံ: usta အဘို့ကို Mike Stobe / Getty Images
wearable နည်းပညာကိုသိသာပစ္စည်းတွေကန့်သတ်ထားမည်မဟုတ်ပါ, နှင့် 2015 နောက်ဆုံးတော့ smartclothing အလင်း-up ကခရစ္စမတ် ​​Jumper ထက်ကျော်လွန်တဲ့အဖြစ်မှန်ဖြစ်လာကြသောအခါထိုနှစ်တွင်ဖြစ်ဟောကိန်းထုတ်သည်. အထက်တန်းလွှာအားကစားသမား၏ဒိုမိန်းနှင့်တစ်ပြိုင်နက်, smartclothing ဖြည်းဖြည်းချင်းမြင့်လမ်းပေါ်ကိုဆင်း filtering ဖြစ်ပါတယ်.
ထိုကဲ့သို့သော Adidas အဖြစ်အဝတ်အစားတံဆိပ်, Armour နှင့် Ralph Lauren လက်အောက်တွင်, အမေရိကန်ပွင့်လင်းတင်းနစ်ပြိုင်ပွဲမှာ၎င်း၏အသစ် smartshirt ချွတ်ပြသသော, built-in Heart-rate နှင့်အသက်ရှူစောင့်ကြည့်မှုနှင့်အတူအားကစားထိပ်စေရန်စတင်နေကြတယ်.
"Smartshirts အများကြီးပိုတိကျစွာနှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်အသက်ရှူတူသောအရာတို့ကိုတိုင်းတာနှင့်အခြား device ကိုဝတ်ဆင်ဖို့မလိုဘဲနိုင်ပါတယ်, သူတို့တစ်တွေပိုကြီးဧရိယာအနှံ့ပိုပြီးအာရုံခံကိရိယာတွေကို embed နိုငျသောကွောငျ့,"McIntyre ကပြောပါတယ်.
ကျော် 10 မတ်အဝတ်ကိုရောင်းချခံရဖို့မျှော်လင့်ထားကြသည် 2015, သမားရိုးကျရင်ဘတ်ကြိုးများနှင့်အခြားအားကစားဝါသနာအိုးဂီယာအိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်. Smartsocks, အခက်ခဲသငျသညျလေ့ကငျြ့ပေးတောက်ကြောင်းအဆိုကိုခြေရာခံခြင်းအတွင်းခံအဝတ်အစားများနှင့်အလင်းဓာတ်ပြုအကျီပိုက်လိုင်း၌ရှိကြ၏.
ကြံ့ခိုင်ရေးရုံတစျခုဧရိယာ smartclothing အားဖြင့်စူးစမ်းလျက်ရှိသည်, ထုတ်လုပ်သူများက GPS ဖိနပ်ရှိလာနှင့်အတူ, အကျီအားသွင်းဆက်ဆံမှုနှင့်စမတ်ဖုန်းပြောင်းလဲနေတဲ့အရောင်. သငျသညျလုံလောက်နေရောင်ခဲ့ကြရသောအခါတောင်မှ beachwear အရောင်ပြောင်းလဲကြောင်းကိုသင်၏ဆန္ဒရှိ tan အဆင့်နှင့်ရေကူးဝတ်စုံခြေရာခံကြောင်းလက်ကောက်နှင့်အတူစမတ်သွားနိုင်.
← ယခင် Post မှ ကမ္ဘာမြေရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးရေကန်၏အောက်မှာ Installed ကင်မရာ →